Marka Laga Reebo Messi…Roma Oo Shaacisay Xidiga Kale Oo Ay Barcelona Kasoo Afduuban Lahayd %
FalanqeyntaItalyLatest Sports News
Monchi, ciyaaryahankii hore ee qaranka Spain, kaasoo hada ah Agaasimaha Cayaaraha kooxda kubada cagta AS Roma, ee wadanka Talyaaniga ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay in marka laga soo tago Lionel Messi, uu Barcelona kasoo afduuban lahaa Ivan Rakitic.
Barcelona iyo AS Roma, ayaa waxay isaga hor imaan doonan bisha soo socota kulan ka tirsan lugta koowaad ee wareega Sideed dhamaadka koobka xiisaha leh ee Champions League, iyadoona ay xusid mudan tahay in lugta koowaad guriga Barca lagu dheeli doono.
Ciyaartaan oo ah mid si weyn loo wada sugayo, islamarkaana kamid ah kuwa ugu xiisaha badan wareegan ayaa waxaa wax walba oo ku saabsan hadii uu ALLE raali ka noqdo aad kala socon doontaa Shabakada wararka cayaaraha ah ee Laacib.so.
Monchi iyo Rakitic ayaa waxay kasoo wada shaqeeyeen naadiga wadanka Spain ka dhisan ee Sevilla ka hor inta uusan Barcelona kusoo biirin wiilkaan udhashay wadanak Croatia, kaasoo Bluagrana hadda u ah mid aad muhiim u ah.
Isagoo la hadlayay warbaahinta ayaa waxaa Monchi la weydiiyay xidiga uu Barcelona kasoo qaadan lahaa marka laga yimaado Lionel Messi, isagoona ku jawaabay: “Marka laga yimaado [Lionel] Messi, waxaan lasoo saxiixan lahaa [Ivan] Rakitic.
Hadaba, akhriste adiga ahaan, hadii yaad lasoo wareegi lahayd – marka laga yimaado Lionel Messi – Murashixinta waxaa kamid ah: Ter Stegen, Pique, Jordi Alba, Busquets iyo Suarez, kuwaasoo dhamaantooda muhiim u ah Barcelona.
Manchester United ayaa ugu dambeyn iska barejeynaysa kooxaha kale ee Premier League sabab